2019 Ny ankamaroan'ny Peptide Degarelix: fanafody ampiasaina amin'ny homamiadana prostate
1. Inona ny Degarelix?
2. Inona no atao hoe vovoka Degarelix?
3. Degarelix powder Mekanja asa
4. Fifandraisana iraisam-pirenena
5. Mety misy atahorana ve raha sendra sorona Degarelix na be loatra loatra aho?
6. Inona no fiantraikany sy fampitandremana mety hitranga ny Degarelix?
8. Fampahalalana fanampiny
Ny homamiadana ankehitriny, dia lasa iray amin'ireo aretina manohintohina ny fahasalaman'ny olona sy ny saina. Ny fisorohana sy ny fitsaboana mialoha dia ilaina ny mitsabo an'io aretina io. Ny vovony Degarelix dia fanafody mahomby amin'ny fikarakarana ny homamiadan'ny prostate, ary tokony hanao hetsika isika hahatakatra ireo fampahalalana manan-danja sasany momba izany mba hahafahantsika mampiasa azy io amin'ny fomba mety sy azo antoka.
Degarelix (214766-78-6) dia fanafody fitsaboana hormonina izay mampihena ny habetsaky ny hormonina ao amin'ny vatana, ao anatin'izany ny testosterone. Izy io dia sokajina ho sokajy fanafody fantatra amin'ny anarana hoe antagonista mpandray ny hormonina gonadotropin (GnRH). Ity zava-mahadomelina azo avy amin'ny peptide synthetic ity dia fantatra amin'ny anarana marika "Firmagon". Ireto misy masontsivana:
Kilasy zava-mahadomelina: GnRH Analogue; GnRH antagonista; Antigonadotropin
Formula simika: C82H103ClN18O16
Massar Molar: 1630.75 g / mol g · mol − 1
Làlam-pitantanana: Fomba tsindrona malemy
Sokajy: Sokaoka (70-80%), Urine (20-30%)
Halavam-piainana: Ny andro 23-61
Ny vovony Degarelix dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny homamiadana prostate. Ny FDA dia nankasitraka ny fanafody ho an'ny fitsaboana ny homamiadan'ny prostate mandroso amin'ny marary amerikana amin'ny 24th Desambra, 2008. Amin'ny 17th Ny volana febroary lasa teo, 2009, ny Vaomiera eropeana dia nifanaraka ary nankatoavina ny Degarelix fanafody ho ampiasaina amin'ireo marary olon-dehibe izay voan'ny homamiadana prostate.
Mariho fa D injera tsindrona dia tokony ho tarihan'ny dokotera na mpitsabo mpanampy amin'ny toeram-pitsaboana. Degarelix dia mety ampiasaina koa ho an'ny tanjona hafa. Any Sweden, ohatra, ny fanafody dia ianarana ho ampiasaina amin'ny alàlan'ny famoahana fanafody simika mba hindrana amin'ny mpandika firaisana. Ny fikarakarana ny homamiadana Degarelix dia heverina ihany koa fa fitsaboana hafa ho an'ny homamiadan'ny nono amin'ny lahy.
Mety hanoro ny fanafody anao amin'ny dokotera hafa ny dokotera anao. Raha tsy azonao antoka hoe nahoana ianao no mandray an'io fanafody io, dia zava-dehibe ny miresaka amin'ny dokotera anao. Toy ny fanafody hafa, dia tsy tokony homena olon-kafa an'iza i Degarelix, na dia mitovy ihany aza ny soritr'aretina mitovy aminao. Izany dia satria mety hampidi-doza ny zava-mahadomelina raha alaina raha tsy tenin'ny dokotera.
(1) Tokony ho fantatrao izay zavatra madinidinika alohan'ny maka an'i Degarelix
Ireto manaraka ireto ny zavatra manan-danja tokony ho fantatra alohan'ny hanaovana ny fanafody:
Ny Degarelix dia mety hiteraka tsy fahampiana lehilahy. Raha tsy andrinao ny ho lasa razana amin'ny ho avy, dia zava-dehibe ny miresaka amin'ny dokotera anao. Azonao atao ny mandinika ny fitehirizana ny tsiranoka alohan'ny hanombohana fitsaboana.
Ity zava-mahadomelina ity dia tsy ekena ho an'ny vehivavy. Ny vehivavy bevohoka dia tsy tokony hampiasa an'io fanafody io. Izany dia satria mety manimba ny zaza ny foza. Ny vehivavy mampinono, na ireo maniry hiteraka dia tokony hisoroka ny fampiasana an'io fanafody io. Raha ny tena izy, ny vehivavy amin'ny ankapobeny dia tsy tokony hampiasa Degarelix.
Tsy azo antoka ny maka an'i Degarelix raha marary ara-pahasalamana. Aza adino ny mampahafantatra anao amin'ny dokotera raha efa voan'ny QT lava ianao, izay aretim-po tsy fahita firy izay mety hiteraka ratram-po, tsy misy fihetseham-po, na fahafatesana tampoka. Tokony hampandre ny dokotera anao koa ianao raha voan'ny aretim-po, voa, na voan'ny rà. Lazao amin'ny dokotera koa ianao raha manana sodium, magnesium, potasioma, na calcium ao anaty ranao.
Zava-dehibe ihany koa ny milaza amin'ny pharmacist anao na ny dokotera raha tsy mahazaka fanafody na fanafody sasany ianao. Izany dia hahafahan'izy ireo hahafantatra raha tsy mahazaka ny tsindrona Degarelix.
(2) Fatran'ny tsindrona Degarelix
Degarelix dia misy endrika roa:
120 mg vial: Ny vava tsirairay tokana tsirairay dia misy ny 120 mg ny degrème Degarelix toy ny Degarelix acetate.
80 mg vial: Ny vava fampiasana tsirairay dia misy 80 mg ny Ny vovony Degarelix as Degarelix acetate.
Ny Degarelix dia tonga amin'ny endrika vovon-dronono, izay tokony afangaro amin'ny ranon-tsavony sy tsindrona eo ambanin'ny hoditra eo amin'ny faritry ny kibony, eo anelanelan'ny taolan-tehezana sy ny fehin-kibo. Vantany vao mahazo an'io fanafody io ianao dia homena tsindrona Degarelix roa ianao. Aorian'ny fatran'ny tsindrona Degarelix voalohany dia hahazo tsindrona iray ianao mandritra ny fitsidihana isam-bolana.
Ny fatra voalohany dia matetika Degarelix 240 mg dia voatondraka ho tsindrona 2 subcutaneous in Degarelix 120 mg tsirairay ao anaty konsentrasi 40 mg / mL. Aorian'ny fatra voalohany, ny tsindrona subcutaneous 80 mg ihany no hahazoanao tsindrona 20 mg / mL isaky ny andro 28.
Rehefa handeha handray tsindrona Degarelix, dia tokony hisoroka ny fanaovana akanjo lava, ny fehikibo na fehikibo manodidina ny vavanao izay hitondrana ny tsindrona. Aorian'ny nahazoanao tsindrona Degarelix, antoka fa ny fehin-kibo na fehikibo tsy mametaka ny faritra tsindrona. Tsy tokony hidoroka na hanorotoro kely ilay faritra ifindran'ny zava-mahadomelina.
Ny fitsaboana ny soritr'aretin'ny homamiadan'ny prostate izay miankina amin'ny testosterone amin'ny fitomboana dia mitaky ny famerenan'ny hormonina tsy tapaka. Mba hahatratrarana izany dia tsy maintsy ilaina ny asiana Degarelix acetate araka ny toromariky ny mpitsabo.
Mba hahazoana antoka fa manampy amin'ny fahasalamanao ny fanafody Degarelix, dia mila mandalo fitiliana tsy tapaka ianao matetika. Aza adino ny mitazona ireo fanendrena manaraka anao amin'ny dokotera.
Tsara homarihina koa fa ny tsindrona Degarelix dia mety hisy fiantraikany amin'ny valin'ny fitsapana fitsaboana sasany. Vantany vao eo ambanin'ity fanafody ity ianao dia azonao atao ny milaza amin'ny dokotera fa nahazo an'io fanafody io ianao rehefa maka fitsapana fitsaboana manaraka.
3. Degarelix powder Mekansy asa fanaovan-javatra
Ny testosterone hormona lahy dia voalaza fa handrehitra ny fitomboan'ny sela homamiadana ao amin'ny prostate. Ny fanafody manakana ny fitiliana amin'ny famokarana testosterone dia fantatra fa manalefaka na mampiato ny fitomboan'ny sela homamiadana ao amin'ny prostate. Misy ihany koa ny fanafody manakana ny hetsika testosterone amin'ny fanakanana ny famatsiana ny hormonina lahy amin'ny sela homamiadana.
Ny vovony Degarelix (214766-78-6) miasa amin'ny alàlan'ny fampihenana ny haben'ny testosterone vokarin'ny vatana. Izany dia amin'ny alàlan'ny fanakanana ireo mpandray ireo GnRH ao anaty kelin'ny pituitary ao anaty ati-doha. Izany dia manakana ny famokarana hormonina luiteinising, ka manakana ny fitiliana tsy hamokatra testosterone.
Sahala amin'ny fanafody homamiadana hafa, i Degarelix dia afaka mifanerasera amin'ireo fanafody hafa sy vokatra hohanina. Ireto manaraka ireto misy karazana fanafody mety hiteraka fifaneraserana rehefa ampiasaina miaraka amin'i Degarelix:
Ny fanafody manohitra ny emetika
Ny inhibitor kinase proteinina sasany
Fampandrenesana Serotonin Reuptake Inhibitors
Rehefa ampiasaina miaraka amin'i Degarelix, ny fanafody sasany dia mety hampitombo ny loza mety hiteraka karazana abidia mahazatra tsy fantatra amin'ny anarana hoe QT fanoratana. Mahazo loza tokoa ianao noho ity toe-javatra matanjaka ity sy ireo fahasimban'izy ireo raha:
Zokiolona ve (65 taona no ho miakatra)
Asaivo tantaram-pianakaviana amin'ny gadona tsy mahazatra amin'ny fo na aretim-po
Manàna tantaran'ny fahafatesan'ny fo tampoka
Manana pulsa miadana iray na misy olona mihena
Manana faharetan'ny kongenital amin'ny elanelan'ny QT
Manana fatran'ny calcium, magnesium, na fatran'ny potasioma ambany
Raha manana ireo fepetra voalaza etsy ambony ianao, na manao fanafody sasany hitantanana ny toe-pahasalamana, dia zava-dehibe ny ilazanao amin'ny dokotera alohan'ny hampiasana ny fanafody Degarelix. Aza adino ny mampahafantatra anao amin'ny dokotera anao na ny dokotera momba ny fanafody, fanafody tsy dia misy, sakafo mahavelona, ​​vokatra momba ny ota sy vitaminina alainao. Izany dia hanampy amin'ny fisorohana anao amin'ny fanafody mety hiteraka fifandraisan'ny Degarelix.
Zava-dehibe ny mifanakalo hevitra amin'ny dokotera momba ny toe-pahasalamanao sy ny fanafody mety horaisinao noho ny antony maro. Voalohany, manome alalana hevitra ny dokotera hiresaka aminao ny fiantraikan'ny fitsaboana amin'ny fanafody hafa. Hampandre anao koa ny dokotera aminao ny fiantraikan'ny aretinao amin'ny fatra, ary koa ny fahombiazan'ny Degarelix. Hampandre anao koa ny dokoteranao raha ilaina ny fanaraha-maso manokana.
Tsy misy traikefa klinika miaraka amin'ireo risika mifandraika amin'ny tsy fahampian'ny fihoaram-pefy amin'ny Degarelix. Na izany aza, tsy tokony hijanona tsy hitondrana an'io fanafody io ianao raha tsy manontany ny dokotera. Raha sendra tsy mahita fotoana hametrahana ny tsindrona Degarelix ianao, antsoy ny torolàlana ho anao ny dokotera.
Koa satria Degarelix acetate tokony omen'ny dokotera, tsy dia fahita firy loatra ny mety hihoatra ny overdose. Raha misy ny overdose Degarelix, zava-dehibe anefa dia miantso ny foibem-pitantanana poizina ianao na mitady mpitsabo avy hatrany. Vonona ny hampiseho na hilaza ny zavatra nalainao, firy ny noraisinao, ary rehefa noraisinao izany.
Toy ny fanafody maro hafa, ny Degarelix dia mety hiteraka voka-dratsy isan-karazany. Ny voka-dratsin'i Degarelix dia mety ho malefaka na mahamaika, ary mety maharitra ihany koa izy ireo na maharitra. Ireto manaraka ireto no fahita mahazatra Vokatry ny lafiny Degarelix, izay maro izay tsy mbola iaretan'ny olon-drehetra mandray an'io fanafody io:
Nihena ny haben'ny testicles
Mitombo ny fitomboana matetika
Fihetseham-po eo amin'ny hoditra eo amin'ny toerana tsindrona, toy ny fanaintainana, ny mena, ny hamafin'ny rivotra, ny famokarana
Ny tombony mavesatra
Na dia tsy matotra aza ny ankamaroan'ny fiantraikany ambony amin'ny Degerelix, dia mety hiteraka olana goavana izy ireo raha maharitra mandritra ny fotoana lava. Zava-dehibe ny hitadiavanao fanampiana ara-pitsaboana raha sendra mahatsiravina izao trangan-javatra tsy fahita firy izao nefa ratsy:
Naratra na fanaintainan'ny taolana
Ny tsy fanjary sy ny fipoahana ny kibo
Ny soritr'aretin'ny fluida, toy ny kohaka, tazo, tazo, ary tenda
Spike amin'ny kolesterola ra
Spike amin'ny tosidra
Koa satria mampihena ny famokarana testosterone ny Degarelix, dia mety miteraka ambaratonga sela mena izany, fepetra iray antsoina hoe anemia. Ny soritr'aretin'ny anemia dia misy fanaintainana, hoditra marevaka, reraka tsy mahazatra ary / na fitaintainan'ny fofon'aina, zava-dehibe ny fifandraisanao amin'ny dokotera avy hatrany. Nanao fitsirihana ra ny dokotera tsindraindray mba hanaraha-maso ny isan'ny sela mena ao amin'ny ranao.
Degarelix koa dia voalaza fa hampitombo ny risika ny diabeta. Raha marary diabeta ianao dia zava-dehibe ny tsy maintsy anaovanao fitsapana tsy tapaka mba hanaraha-maso ny haavon'ny siram-ra.
Degarelix ihany koa dia voalaza fa hampitombo ny risika ny osteoporosis. Mety mahatonga ny taolana ho lasa manify ary mora tapahina mora kokoa. Raha manana osteoporosis ianao dia zava-dehibe ny mampandre ny dokotera anao mba hahafahanao mamaritra ny fiantraikany amin'ny fitsaboana amin'ny Degarelix.
Ny marary sasany dia mety mahatsapa fiantraikany amin'ny lafiny Degarelix ankoatra ireo voalaza etsy ambony. Raha mahatsapa soritr'aretina mahatonga anao tsy mahazo aina na manahy anao, dia tsara kokoa raha tsy mahita mangataka ny dokotera ianao.
Afaka manoro hevitra anao ny dokotera anao mba tsy hisotro ny tsindrona Degarelix raha sendra misy aretim-po iray ianao. Ireo soritr'aretina ireo dia mety hisy fanaintainana tampoka, fanaintainana miakatra ao an-damosinao, fahatsapana ny tsindry na fanamafisana ny tratrany, mandoa, mandoa, mifofotra ary / na fanahiana.
Mety hanome torohevitra anao koa ny dokotera anao mba tsy hitsahatra hampiasa ny Degarelix raha sendra misy fisehoan-javatra mahatsikaiky ianao. Ireo soritr'aretina ireo dia mety ahitana angioedema, izay mampiavaka ny fihenan-damosana, sahirana ny fifohana rivotra ary ny fihanaky ny tarehy, vava, tanana ary / na tongotra.
Misy samihafa Fampitandremana Degarelix hitadidy. Ny iray amin`ireo dia ity fanafody ity dia afaka mandalo ny tsiranoka vatana (mandoa, urine, hatsembohana, feces). Noho izany, tokony hohalavirinao ny fidiran'ny tsiranoka amin'ny vatanao hifandray amin'ny tananao na ny hoditry ny olon-kafa sy ny mpilelaka hafa mandritra ny ora 48 farafahakeliny aorian'ny nahazoana tsindrona Degarelix.
Ny mpiambina dia manoro hevitra ny hanao fonon-tànana vita amin'ny vy vita amin'ny tanana, rehefa manadio ny tsiranoka amin'ny marary ary rehefa mikarakara lamba maloto na lampin. Tokony hosasana misaraka amin'ny fanasan-damba hafa ny lamba vita amin'ny landy sy ny landy.
Raha misy ny voka-dratsin'ny Degarelix misy ahiahy momba ny fahasalamana dia misy ihany koa ny tombony Degarelix raha tsy andrasana rehefa mampiasa an'io fanafody io. Ao amin'ny fandinihana klinika dia naseho fa ny tsindrona Degarelix dia manolotra haingana kokoa ny haavon'ny testosterone noho ny fitsaboana fitsaboana konvectional hafa. Ity fanafody ity dia tsy miteraka ny fampihenana ny testosterone voalohany izay mety hiteraka tsy fahampian'ny aretina hatrany.
Tombontsoa iray hafa an'ny Degarelix dia ny fandeferana tsara amin'ny ankapobeny ny zava-mahadomelina, ankoatry ny fanadihadiana iray dia nanambara fa ny fanehoan-kevitra avy amin'ny toerana fanindronana dia niseho tao amin'ny 40 isan-jaton'ny tarika Degarelix niangona <1 isanjaton'ny vondrona leuprolide. Ireo fanehoan-kevitra ireo dia somary malefaka na antonony, ary nitranga matetika taorian'ny tsindrona voalohany.
Ny angon-drakitra voalohan'ny fandinihana klinika maromaro dia manondro fa raha oharina amin'ireo mpikatroka LHRH, i Degarelix dia nampifamatotra tamin'ny fahaveloman'ny rano ambony kokoa ao anatin'ny 1st taona fitsaboana. Ny zava-misy fa ny voka-dratsiny amin'ny fahombiazan'ny fitsaboana ny homamiadan'ny prostate dia avo kokoa rehefa mampiasa ity fitsaboana ity dia iray amin'ireo tombontsoa Degarelix izay mahatonga ity fanafody ity mila andramana.
Degarelix sy toaka
Ny fisotroana toaka amin'ny vola kely dia toa tsy misy fiantraikany amin'ny maha-mahasoa na ny fiarovana ny degarelix. Na izany aza, tokony hiala tsy hisotro alikaola be ianao rehefa maka an'io zava-mahadomelina io.
Raha manana homamiadana prostate ianao na olon-tiana iray, dia azo antoka fa iray amin'ireo safidy fitsaboana tsara indrindra azonao atao ny fitsaboana simika. Ny antony tokana azo heverina fa mety hisafidy fandidiana amin'ny fitsaboana hormonina toa an'i Degarelix ny vidiny. Na eo aza izany, ny fihenam-bidy rehetra dia ho rakotra amin'ny tombontsoan'ny Degarelix.
Mety manontany tena ianao ny amin'ny vidiny Degarelix. Ny salanisan'ny vidin'ny fitsaboana amin'i Degarelix dia 4,400 80 $ eo ho eo. Izany dia mifanaraka amin'ny vidin'ny fitsaboana hormonina hafa misy ho an'ny homamiadan'ny prostaty. Ny vidin'ny tsindrona Degarelix amin'ny tsindrona 519 mg dia manodidina ny $ XNUMX ho an'ny famatsiana vovo-tsolika iray ho an'ny tsindrona. Miankina amin'ny fivarotam-panafody vanginao ihany koa ny vidiny.
Azonao atao ihany koa ny mahita "Mividy an-tserasera Degarelix”Doka. Mila mitandrina anefa ianao rehefa mividy ny zava-mahadomelina amin'ny Internet. Hamarino tsara fa manao fisafoana sy ny zotram-po mety ianao alohan'ny hametrahanao ny fanafody amin'ny mpivarotra amin'ny Internet. Ataovy azo antoka fa ara-dalàna ny mpamatsy na fanafody an-tserasera ary ny varotra amidiny dia ara-dalàna sy madio amin'ny zava-mahadomelina.
Degarelix dia tokony hotehirizina amin'ny mari-pana amin'ny efitrano. Aza adino ny miaro an'io fanafody io amin'ny hazavana sy ny hamandoana. Toy ny fanafody hafa, avelao tsy ho tratra amin'ny zaza ny Degarelix.
Aza manary ny vovo-dronono Degarelix amin'ny fako ao an-trano na any anaty loto, toy ny any anaty efitrano fidiovana na manidina ao anaty tatatra. Anontanio ny dokotera na ny pharmacist anao ny fomba hanipazana fanafody efa lany daty na tsy ampiasaina intsony.
Van Poppel H, Tombal B, et al (Oktobra 2008). Degarelix: mpanafatra mpandray hormonina gonadotropin (GnRH) mpandray blocker-vokarin'ny herintaona, multicentre, kisendrasendra, dingana faha-roa fitadiavana fatra amin'ny fitsaboana homamiadan'ny prostaty. EUR. Urol. 54: 805-13.
US National Library of Medicine National Instituto momba ny Fahasalamana, famakafakana lafo vidy momba ny degarelix amin'ny fikarakarana ny homamiadana miantehitra amin'ny hormone lehibe any Royaume-Uni, Lee D1, Porter J, Brereton N, Nielsen SK, 2014 Apr; 17 (4 ): 233-47.
Gittelman M, Pommerville PJ, Persson BE, et al (2008). 1 herintaona, marika misokatra, fatra andiany faharoa in-II fitadiavana fandinihana ny degarèse ho an'ny fikarakarana ny homamiadana prostate any Amerika Avaratra. J. Urol. 180: 1986-92.